Niile akụkọ na map ndị metụtara ụgbọ okporo ígwè Ankara, Ankaray na Ankaara ụgbọ ala dị ka ụgbọ okporo ígwè na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè Ankara
Onye na-ahụ maka ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ Zehra Zümrüt Selçuk kwupụtara na a ga-etinye cadres 1.343 maka ndị ntorobịa anyị na-erite uru na nchedo steeti. Minista Selçuk kwuru, "Site na June 1, ndị na-eto eto anyị chọrọ ka etinye ha n'ụlọ ọrụ ọha. [More ...]
Minista na-ahụ maka ime obodo ezipụla okirikiri gbasara ọchịchị gọvanọ iri asatọ na isii (“Curfews of Persons Under the Age of 81 and over and over 18”). Circle kwuru, sị, “Childrenmụaka na ụmụ na-eto eto ị na-eme iwu ọpụpụ [More ...]
Ozi nke Mịnịstrị nke Mịnịstrị zipụrụ okirikiri banyere mgbochi mmachi iji tinye n'ọrụ na mpaghara 15 n'etiti 29.05.2020 na 24.00 na 31.05.2020, 24.00. Nkọwa nke okirikiri: Site na oge nke ntiwapụ nke coronavirus, Ministri Ahụike na [More ...]
Ihe niile gbasara Ankara Sivas MashT project: Ankara (Kayaş) Kırıkkale Yozgat Sivas Line Speed ​​Train Line, nke nwere mkpokọta 393 km, ezubere maka 2007-2019. Yerkoy [More ...]
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu, tinyere nhazi oche ya na-adịghị ahụkebe, ga-enye ndị njem 411 n'ụdị ụdị CAF nwere ikike nke ndị njem 185 na ndị njem 483 n'ụdị Siemens nwere ikike 213. Trazọ ụgbọ ala anyị nwere ikike pasent 50 [More ...]
Obodo Ankara gara n’ihu na-arụ ọrụ asphalt n’ime oge ụbọchi anọ a na-ekwupụta n’oge mmeghe nke ọnwa Ramadan na mgbede ọgụ a na-ebuso agha Coronavirus. Site na Mamak rue Polatlı, site na Sincan rue Elmadağ [More ...]
Kọmịshọn Ankara Obodo Mansur Yavaş rịọrọ arịrịọ dabere na nde 750 TL maka ọrụ İstasyon Caddesi na ụzọ a na-aga n'okporo ụzọ dị na Kansụl City jụrụ site na Atụmatụ na Mmefu Mmefu, [More ...]
Onye na-ahụ maka ezinụlọ, ndị ọrụ na ndị ọrụ mmekọrịta Zehra Zümrüt Selçuk kwupụtara na ALO 183 Social Nkwado Line, otu n'ime onelọ Ọrụ Oku na-enye ọrụ n'ime Ozi, ga-enyekwa ọrụ site na ngwa WhatsApp. ALO 183 [More ...]
Nwere ike nweta ozi gbasara ihe niile dị ka oge ụgbọ oloko, tiketi ụgbọ elu na mgbanwe tiketi site na ịkpọ oku kọntaktị TCDD. Banyere ụgbọ oloko, ịnwere ike ịkpọ nọmba ekwentị TCDD ma kpọtụrụ onye na-anọchite anya ndị ahịa TCDD n'efu. [More ...]
Njem ụgbọ oloko ahụ kwụsịrị n'ihi ụdị ọrịa ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) malitere n'ụtụtụ a na ememe a na-eme na Ankara YHT Gar, n'okpuru ụkpụrụ siri ike nke Kọmitii Sayensị kpebiri. A ga-enwe ọrụ nri n'ụgbọ oloko? [More ...]
Minista Karaismailoğlu gara ememe e mere na Ankara YHT Gar maka ịmalite ọrụ nke ụgbọ oloko kwụsịrị n'ihi ụdị ọrịa coronavirus ọhụrụ (Kovid-19). Minista Karaismailoğlu, onye ya na ndị njem bịara ịzụta tiketi na-akparịta ụka [More ...]
Calllọ Ọrụ Nlekọta Alo 181 nke Ministry of Environment na Urbanization zara oku 4 n'ime ọnwa anọ mbụ nke afọ a. [More ...]
A na-arụ ọrụ dị elu Train Train (YHT), nke kwụsịtụrụ n'ihi usoro COVID-19, na Fraịde na 07:00 na ụgbọ elu Ankara-Istanbul. Minister nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu na-ebu ụzọ ụgbọ oloko mbụ ahụ. Banyere isiokwu [More ...]